नौ सय व्यक्तिको भीडमा सङ्क्रमितको २८ घण्टा बास ! – Everest Pati
नौ सय व्यक्तिको भीडमा सङ्क्रमितको २८ घण्टा बास !
धनगढी, २३ चैत । भारतबाट फर्किएका ९१४ जनाको भीड । चैत १० गते राति करिब ८ बजेतिर गौरीफन्टा नाकामा पुग्यो । भारतबाट फर्किएका नेपालीको त्यो भीडले ह्वात्तै नेपाल प्रवेश गर्न भने पाएन ।
गौरीफन्टा नाकाबाट प्रवेश गर्नु भएका सङ्क्रमित व्यक्तिलाई लम्कीचुहा नगरपालिका–९ स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । उहाँलाई चैत १२ गते क्वारेन्टाइनमा राखिएको जनाइएको छ । सो विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा ४४ जना र सङ्क्रमित युवासंगै एउटै कोठामा थप तीन जनालाई पनि राखिएको लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगर स्वास्थ्य संयोजक जयन्ती बिसीले बताउनुभयो । याे खबर गाेरखापत्र दैनिकमा छ ।